Kooxdeena | Boston School Finder
Latoya Gayle, Agaasimaha Fulinta
Agaasimaha Fulinta, Latoya waxay qaabeeysaa hiigsiga iyo shaqada Boston School Finder ayada diirada saaraaysa kordhinta helitaanka xogta waxbarashada iyo fursadaha waxbarasho ee waalidiinta, gaar ahaan qoysaska aan cadaanka ahayn. Waxay abuurtaa ayna siiwadaa wada shaqayn xeeladaysan oo lalayeesho ururada iskaashiga la leh Boston School Finder ayna kujiraan degmooyinka, dugsiyada, maalgaliyaasha, xeer sameeyaasha ururada bulshada iyo dadka saamaynta ku leh, waalidiinta, iyo lataliyaasha. Iyada oo kaashaneysa shaqadeeda, Latoya waxay u dooddaa siyaasadaha iyo barnaamijyada waxbarashada kuwaasoo sida ugu wanaagsan ugu adeegaya qoysaska Boston.
Latoya sidoo kale waxay kamid tahay Aasaasyaasha waana Agaasiaha Fulinta ee Hooyooyinka Caawimaada baxsha, kuwaasoo ah urur Boston kudhaqan oo kashaqeeya sinaanta ayagoo lashaqaynaaya dugsiyada iyo degmooyinka, iskaashatada bulshada iyo dhinacyada kale ee ay qusayso. Ururka ayaa kashaqaynaaya yaraynta daldaloolada dhanka waxbarashada, bulshonimada iyo fursadaha dhaqaale iyo guulaha ayagoo kor uqaadaaya wadashaqaynta kajirta dugsiyada iyo bulshooyinka ee kadhaxaysa waalidiinta iyo qoysaska aan cadaanka ahayn.
Latoya ayaa qoyskeeda kulanool Boston, waxayna dhashay sadex caruur ah oo soodhigtay siina dhigan doona dugsiyada kuyaala Boston.
Ayadoo ah Agaasimaha Maaraynta, Rana waxay kormeertaa shaqooyinka Boston School Finder waxayna sidoo kale maaraysaa shaqada hormarinta iyo iskaashiyada ee websaydhka Boston School Finder. Rana waxay xaqiijineysaa in websaydhka Boston School Finder ka caawiya dimuqraadiyaynta hannaanka doorashada dugsiga sidoo kale uu taageero siiyo waalidiinta, qoysaska, iyo iskaashatada bulshada sidii ay ugu heli lahaayeen ilmahooda dugsi ku habboon.
Kahor inta aysan shaqada Boston School Finder kusoo biirin, Rana waxay kasoo shaqaysay Maareeye sare oo dhanka Iskaashiga Istaraatiijiyada ah oo katirsan barnaamijyada Salsify, oo ah shirkad ganacsiga khadka tooska ah oo kutaala Boston. Inti ay kujirtay hawlaheeda xirfadeed, Rana waxay kasoo shaqaysay ururo ka kala tirsan qaybaha waxbarashada gaarka loo leeyahay iyo tan guud ba, ayadoo taageero siinaysay ardayda iyo qoysaska kudhaqan gudaha iyo daafaha Boston. Rana waxay horay ugasoo shaqaysay ayna soohogaamisay kooxda Adeegyada Qalin Jabinta ee dugsiga Roxbury Prep Charter School, waxay soo tababartay kooxda hogaaminta dugsiga, waxayna hogaanka usoo qabatay dhaqan galinta barnaamijyada caawimaada waxbarashada ee dugsiga Phoenix Charter Academy Network.
Rana ayaa qoyskeeda kulanool Boston, waxayna dhashay labo caruur ah oo soodhigtay siina dhigan doona dugsiyada kuyaala Boston.
Keiko Zoll, Maareeyaha Suuq-geynta
Maareeyaha Suuq-geynta, Keiko waxay horumarisaa istiraatiijiyadda suuq-geynta iyo mashruuca waxyaabaha ku jira Boston School Finder iyo kanaallada isgaarsiinta. Waxay ka shaqaysaa sidii ay u dhisi lahayd wacyigelinta iyo wadashaqaynta waxyaabaha ku saabsan Boston School Finder, gaar ahaan qoysaska taariikh ahaan aan helin taageerada ee reer Boston.
Kahor inta aysan ku biirin Boston School Finder, Keiko waxay ka soo shaqeeysay qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin waxbarasho sare, ururo khayri ah, ganacsi biloow ah, iyo iyo ganacsiyada macaamiisha qoysaska ah. Maaddaama ay tahay xirfadle kutaqasustay suuq-geynta iyo isgaarsiinta, hamigeeda ayaa ah abuurista mawduuc ayadoo adeegsanaysa sheeko samayn kudhisan ilaalinta masaalixda.
Keiko waxay la nooshahay saygeeda iyo wiilkeeda oo dagan North Shore waxayna u heellan tahay sinnaanta waxbarashada ee dhammaan ardayda iyo qoysaska Boston.
Shellina Semexant, Program Coordinator
Iskuduwaha Barnaamijka ahaan, Shellina waxay si dhab ah kaaga mahad celinaysaa doorkaaga aad kula wadaagi karto macluumaadka qoysaska kuna saabsan doorashada iyo iska diiwaangelinta dugsiga ay doorteen. Caadiyan Creole, waxay sidoo kale taageertaa barnaamijka 'Boston School Finder' iyada oo la dhisaayo iskaashatooyin bulshada mustaqbalka ah si loo gaaro qoysas badan oo kunool guud ahaan Boston.
Iyaddoo hore u ahayd Danjiraha Waalidka ee ururka, waxay ku dartay: "Soo-saaraha Dugsiga Boston waxa uu dib u qaabeeyey sida aan u arko doorashada dugsi." Labadeeda qaybood ee ugu waaweyn ee talo siinta qoysaska: "booqo dugsiga aad dooratay" iyo "had iyo jeer weydii su'aalo."
Shellina waxay ku nooshahay Dorchester iyada iyo carruurteeda, kuwaas oo ka qeybgalay Dugsiyada Dadweynaha Boston, xeerka, iyo dugsiyada xalaasha ah.